ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၁-၆-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၁-၆-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- လွတ်မြောက်ရန် ကြိုးစားဆဲမှာပင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား တိုးလာဟု AAPP-B ပြော click
- ရန်ကုန် ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ရက်ဝင်များကို ဖမ်းရန် မုံရွာရဲက ရန်ကုန်ရဲကို လွှဲပြောင်းတာဝန်ပေးဟုဆို click
- သွားအဖမ်းမခံသလို ရှောင်လည်းမပြေးဟု ဝေမှူးသွင် ပြော click
- ကချင်ဒေသခံများနှင့် တွေ့၍ မြစ်ဆုံ ဆက်လုပ်ရန် CPI ပြောခဲ့ဟုဆို click
- ကျောက်ဖြူ လယ်သမား ၁၃ ဦးမှ ပိုက်လိုင်းကြောင့် ပျက်စီးမြေအတွက် လျော်ကြေးရလိုကြောင်း အထက်ကို စာတင် click
- သိမ်းဆည်းခံ လယ်မြေများ ပြန်ရလိုကြောင်း ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ထံ ရခိုင်လယ်သမားများ စာရေးတောင်းဆို click
- သိမ်းဆည်းလယ်တွင် ထွန်ယက်ခွင့်ရရေး တောင်သူများ တောင်းဆို click
- အနာဂတ် မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးအတွက် သတိပေး၊ ဘက်လိုက်တဲ့ မြေယာခွဲဝေမှု ဆင်းရဲမှုကို မြင့်စေ (ရုပ်သံ) click
- စိုက်စရိတ်ချေးငွေ နောက်ကျ ထုတ်ချေး click
- ကျေးလက်အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်း click
- လက်ထိတ်တန်းလန်းနှင့် အမျိုးသမီးအလောင်း ငဝန်မြစ်အတွင်း ပေါ်မှု ရဲ ၅ ဦးကို ဖမ်းပြီ click
- မင်းလှကန် ပုဂ္ဂလိက လေလံပေးခြင်းကို ကန့်ကွက်သူများ ခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရ click
- ရပ်ကွက်ပြည်သူနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တွေ့ဆုံ click
- ဦးအောင်သိန်းလင်း ညှိနှိုင်းမှုကြောင့် တောင်ဥက္ကလာပ ကြံ့ခိုင်ရေးရုံးနေရာ ဆန္ဒပြဖို့ ပျက်ပြား (ရုပ်သံ) click
- ဒုက္ခသည်များအတွက် ကြိုတင်စီစဉ်ကြရမည်ဟု ဦးအောင်မင်း ပြော (အသံ) click
- ဒုက္ခသည်များ၏ ပူးပေါင်းမှု ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ လိုလား click
- ရခိုင်ဒေသ ဒုက္ခသည်များ ပြန်လည် မထူထောင်နိုင်သေး click
- ဗြိတိန်ဝန်ကြီး Alan Duncan ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရနှင့် စစ်တွေတွင် တွေ့ဆုံ click
- UNHCR အစည်းအဝေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအရေး click
- လားရှိုးပဋိပက္ခကဲ့သို့ ဖြစ်လာမည်ကို နမ္မတူ ဒေသခံများ အထူးစိုးရိမ် click
- လားရှိုးမြို့နယ် သံဃာ့နာယကဥက္ကဌ ဆရာတော်ကြီးအား အစ္စလာမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များမှ ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြု click
- မှော်ဘီ သြဝါဒခံယူပွဲမှ ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ရေးမူ ဟိန္ဒူလူငယ်များ ထောက်ခံ click
- မလေး ပဋိပက္ခကြောင့် မြန်မာလုပ်သား ၃၀၀ ကျော် ထိန်းသိမ်းထား click
- သေနတ်လု ထွက်ပြေးသော တရားခံကို တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးရမိ၊ မြန်မာဘက်သို့ အပ်နှံ click
- KIO စစ်ဗိုလ်အဖြစ် စွပ်စွဲချုပ်နောင်ခံထားရသူ ဦးဘရန်ရှောင် မလွှတ်နိုင်သေး click
- KIA တပ်မဟာ ၄ ကို ချေမှုန်းရန် အစိုးရတပ်ဖွဲ့ စစ်ဆင်နေ click
- မိုင်ဂျာယန်ဒေသအတွင်း အစိုးရနှင့် KIA ကြား တိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာ click
- အစိုးရတပ် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် တပ်ပေါင်းစုစခန်းတခု နောက်ဆုတ်ပေး click
- မြောက်ပိုင်း သျှမ်းပြည်တပ်မတော်၏ တပ်စခန်းအား အစိုးရစစ်တပ် ထပ်မံတိုက်ခိုက် click
- WGEC က နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုင်ရာ မူဘောင်မူကြမ်း MPC သို့ ပေးအပ် click
- တိုင်းရင်းသားများ လက်နက်ကိုင်နေခြင်းသည် ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲထွက်ရန်မဟုတ်ဟု ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရွက်ဆစ် ဆို click
- အစိုးရနှင့် ကေအဲန်ယူတို့ ဇူလိုင်လအတွင်း အလွတ်သဘော ထပ်မံတွေ့ဆုံရန်ရှိ click
- အစိုးရနှင့် KNPP ဒုတိယအကြိမ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှ သဘောတူညီချက် ၈ ချက်ရရှိ click
- ဒုက္ခသည်များ နေရာချထားရေး၊ မိုင်းရှင်းလင်းရေးတို့ အပါအဝင် အချက်ရှစ်ချက် အစိုးရနှင့် KNPP တို့ သဘောတူ click
- ဒုတိယအကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲတွင်လည်း တပ်နေရာ မချထားနိုင်သေး click
- ၁၃၈ ကြိမ်မြောက် ကရင်နီအမျိုးသားနေ့ ကျင်းပ click
- ကရင်နီအမျိုးသားနေ့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့နှင့် KNPP တို့ ပထမဆုံးအကြိမ် အတူတကွ အခမ်းအနား တက်ရောက် click
- ကရင်နီအမျိုးသားများ တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲ - KNPP ဥက္ကဌ click
- ငြိမ်းချမ်းရေး ကြီးကြပ်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ လွတ်လပ်ဖို့လို click
- အပစ်ခတ်ရပ်အပြီး မြို့နှင့် ကျေးရွာအနီးအနား ချထားသည့် တပ်များ ရုပ်သိမ်းဖို့လို click
- DKBA နယ်မြေအတွင်း မြေမြှုပ်မိုင်း အန္တရာယ်မရှိတော့ဟု စစ်ဗျူဟာမှူး ပြော click
- စီအဲန်အေ အခြေစိုက်စခန်းသို့ အစိုးရစစ်တပ် သွားရောက်လေ့လာ click
- ကျည်ဆံဖြင့် ထုလုပ်ထားသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆင်းတုတော် ကိန်းဝပ်မည့်နေရာ အခက်အခဲရှိနေ click
- ဇွန် ၂၁ မြေနီကုန်းမှာ ကျဆုံးခဲ့သူ ကျောင်းသားတွေအတွက် နှင်းဆီပွင့်တွေ ပို့စကတ်တွေနဲ့ ဂုဏ်ပြု (ရုပ်သံ) click
- မြန်မာနှင့်အခြားနိုင်ငံများ နိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှု အော်စလိုဖိုရမ်တွင် နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေး click
- တာဝန်ခံမှုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူ့အဖွဲ့အစည်း (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) click
- မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် တားမြစ်ချက်မှန်သမျှ ILO ရုပ်သိမ်း click
- EU သို့ ပို့ကုန် အခွန်များကို ပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ရမည် click
- တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၅ဝ % ထိုးစိုက်ကျဆင်း၊ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြဖို့ တိုက်တွန်းကြ (ရုပ်သံ) click
- ထိုင်းကုန်သည် အသင်းသားများ မွန်ပြည်နယ်သို့ လာရောက်လေ့လာ click
- မြိတ်-မောတောင်လမ်း ပျက်စီးနေ၍ မြိတ်ငါးလေလံဈေး ပြန်မဖွင့်နိုင်သေး click
- ကားဟောင်းအပ် “စလစ်” ဈေး သိန်း ၁၀၀ ထိ ဈေးမြင့်တက် click
- ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု လျော့ကျအောင် ခုံးကျော်တံတားတစင်း ထပ်မံတည်ဆောက်ရန် စီစဉ် click
- ဆိုင်ကယ်စီမံချက်မှ အကောက်ခွန် ကျပ်သန်း၂၃,၀၀၀ ကျော် ရရှိ click
- Oversea နှင့် နယ်စပ်ကုန်သည်များကြား အခွန်ကောက်ခံမှု တန်းတူမရှိ click
- ရိုက်နှက်ခံရသည့် တောင်ကြီးမှ ကလေးငယ် မိဘမဲ့အမျိုးသမီး သင်တန်းကျောင်းပို့မည် click
- ဓားပြတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ တိုက်ပွဲမှာ မြန်မာက ဓားပြခေါင်းဆောင် ဖမ်းမိ၊ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ရဲ ၄ ဦး ဒဏ်ရာရ click
- ပဲခူးတိုင်း ရွှေတောင်မြို့နယ် ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းပါးပြို၊ ဒေသခံတို့ နေစရာပျောက် click
- ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ပေးဆောင်ရမည့် ရန်ပုံငွေကို ထိုင်းအစိုးရမှ ရက်ရွှေ့ဆိုင်း click
- မွန်ပြည်နယ်အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု ပျံ့နေ click
- မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းတွင် သွေလွန်တုပ်ကွေး ဖြစ်ပွားမှု မြင့်မား click
- ကရင်ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် ကျောင်းဆရာ/မ ၅၀၀ ကျော် လျော့နည်းလာ click
- မဲဆောက်မှ ပြည်တွင်းပြန်သူ ကလေးတချို့ ကျောင်းတက်ရေး အဆင်မပြေ click
- အခြေခံပညာအတန်းများအားလုံး စာမေးပွဲအကျမရှိသည့်စနစ် ကျင့်သုံးရန် လွှတ်တော်တွင်ဆွေးနွေးမည် click
- မူလတန်းအဆင့်တွင် လူ့အခွင့်အရေးသင်ရိုး ပြဋ္ဌာန်းရန် ညှိနှိုင်းမည် click
- အခြေခံပညာမူလတန်းသင်ရိုးတွင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာသင်ကြားမည် click
- မူလတန်းအောက်အဆင့် စကောကရင်ဖတ်စာအုပ် ရေးသားပြုစုပြီးစီး click
- ကိုးတန်းအောင်ရုံဖြင့် နာမည်ကြီး ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများတွင် အလုပ်အကိုင် ရရှိနိုင်တော့မည် click
- ထူးချွန်စွာအောင်မြင်သည့် ကျောင်းသားများအား ဆန်စပါးအသင်းချုပ် ထောက်ပံ့မည် click
- မြန်မာနှင့်ထိုင်း အဆင့်မြင့်ပညာရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ဖွယ်ရှိ click
- ဘော်ဒါကျောင်းသားများ အစိုးရကျောင်းများနှင့် ကင်း၍မရသေး click
- ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ၁၁၂ ကျောင်း ထပ်မံဖွင့်ခွင့်ပြု click
- ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပြန်လည် ဝေစည်တော့မလား click
- စာဖတ်သူတွေ စာ အဆိပ်သင့်ခြင်း ဘေးရန် ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ... (စာဖတ်ခန်း) click
- အမေ့ရနံ့လေးရဲ့ သင်ခန်းစာ (၀တ္ထုတို) click
- အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရသော်လည်း အင်ဂျင်နီယာကောင်စီက ထောက်ခံမှသာ အဆောက်အအုံဆောက်ခွင့်ရှိရန် ဥပဒေကြမ်းတင် click
- ကုသိုလ်တော် ကျောက်စာ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် ဖြစ်ပြီ click
- ဆင်ဖြူငှားရမ်းရေး ထိုင်း လက်မလျှော့သေး click
- ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ အတ္ထုပတ္ထိသမိုင်း ဗွီစီဒီခွေ စတင်ဖြန့်ချိ click
- သရုပ်ဆောင် မေဇွန် လူသတ်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ကိုးနှစ်ကျော်ကျ click
- လူ ၆၀ ကျော်ပါသည့် လူရွှင်တော်များအဖွဲ့ (ရန်ကုန်) ယာယီဖွဲ့စည်း click
- ဗမာပြည်အတွက် ရှာရီရာ လက်ဆောင်ယူလာတဲ့ ၉၆၉ (အပိုင်း ၁) click
- ထိမ်းမြားခြင်း ဥပဒေသစ် ဘာလဲ ဘယ်လဲ (သူ့အတွေး သူ့အမြင်) click
- ဥပဒေနဲ့ ငြိမှာစိုးလို့ (ကာတွန်း) click
- ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျတွင် ဇွန် ၁၉ ရက် တနေ့တည်း မိုးကြိုးပစ်၍ လူ ၁၃ ဦးသေဆုံး click
- G8 ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွင် ပညာရေးအာဂျင်ဒါကို လျစ်လျူရှုထား click
တရုတ်ကို အာချောင်လိုက်တဲ့ ဦးအောင်သိန်းလင်းကို ဖြုတ်ချဖို့ လက်မှတ်စုဆောင်းတယ်ဆိုတဲလူလဲ နောက်ဆုံးတော့ အဖြားရှုးသွားတာပါပဲ။
အခုလည်း ဆန္ဒပြမယ်ဆိုတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်လဲ အဖျားရှုးသွားတာပါပဲ။ ဒီလူတွေ မရှက်တတ်ကြဘူး။
ပြည်သူကိုတောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ပြောဖို့ ငြင်းဆန်နေတာက သိပ်ကို အရုပ်ဆိုးလွန်းပါတယ်။ ဘယ်လို ဒီမိုကရေစီခေတ် အမတ်တွေပါလိမ့်ဗျာ။
ပြည်သူ့မျက်နှာနဲ့ ဦးအောင်သိန်းလင်းမျက်နှာ အကြားမှာ ဘယ်ဖက်လိုက်ရမယ်ဆိုတာကိုတောင် နားမလည်ဘဲနဲ့များ လွှတ်တော်အမတ် လုပ်နေသေးရဲ့။
ဒါတွေက ဘာကိုပြနေလဲဆိုတော့ နိုင်ငံရေးမှာ စစ်မှန်တဲ့အမြင်၊ တိကျတဲ့ ခံယူချက်မရှိဘဲနဲ့ ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်ချင်လို့၊ လုပ်စားချင်လို့၊ ဂွင်ကိုသိလို့ ၀င်လာကြသူတွေပဲလို့ ယူဆစရာ ဖြစ်လာရတယ်။ ကြံ့ဖွံ့က ငွေနဲ့ အာဏာနဲ့ တစ်ချက်ကလေး စည်းရုံးလိုက်တာနဲ့ ပြားပြားဝပ်သွားကြတယ်။ နဂိုကတည်းကမှ ခိုင်မာတိကျတဲ့ ခံယူချက်မရှိဘဲ ကိုယ်ကျိုးအတွက်ပဲ ကြည့်ချင်ကြတဲ့ လူတွေအကြောင်းကို ဦးအောင်သိန်းလင်းလို စစ်ဗိုလ်လူထွက် ကြံဖွံ့တွေက နောကျေလွန်းလို့ ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်လို့ ပြောလိုက်လိမ့်မယ်။
ဦးအောင်သိန်းလင်း မြို.တော်ဝန်ဖြစ်တုန်းက ရန်ကုန်မှာ
မိုးရွာရင် ရေကြီးတာ ရေမြောင်းတွေ တိမ်လို.ဆိုပြီး
၅ ပေအကျယ် ၊ ၅ပေ အနက် ရေမြောင်းတွေလုပ်မှ BCC
(လူနေခွင်.) ပေးမယ် ဆိုလို. လုပ်ကြရတာ ရန်ကုန်က
ကတ္တရာလမ်းကျဉ်း တွေ အတော်များများ ပျက်စီးကုန်တယ်။
.. လပိုင်းအကြာ အမိန်.ပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တော. ၅ ပေအကျယ် ၊ ၅ပေ အနက် ရေမြောင်းတွေ ရပ်ကွက်တွေ
ထဲ ကျန်ခဲ.ပြီး မြောင်းပုပ်နံ. နံပြီးခြင်တွေပေါက်ပွားတဲ.
ရေအိုင်တွေအဖြစ် ကျန်ခဲ.တယ် ၊
.. ဦးအောင်သိန်းလင်း ဟာ စဉ်းစားဥာဏ်နည်းသူပါ ။
ရန်ကုန် ကတ္တရာလမ်းတွေ တစ်ခြမ်းဘဲခင်းပြီး ကြံ.ဖွတ်
အတွက် မဲဆွယ်ခဲ.လို. " လမ်းတ၀က်ခင်း ၊ အောင်သိန်းလင်း " ဆိုပြီး အမည်တွင်ခဲ.သူပါ ။
.. မြေကွက် ၅၀ ပေ x ၅၀ ပေ ရှိတဲ.မြေကွက်တွေ
အဆောက်အဦဆောက်ရင် ယ္ခင် မြေကွက်ပတ်လည်
တဖက် ၁ ပေ ချန်ရမယ်.အစား တဖက် ၃ ပေချန်ရမယ်
မြေကွက် ၅၀ ပေ x ၅၀ ပေ ရှိတဲ.မြေကွက်တွေ
အဆောက်အဦဆောက်ရင် ၄၄ ပေ x ၄၄ ပေ ဘဲ
ပုံပျက်ပန်းပျက် ဆောက်ခွင်.ရကြမှာဖြစ်ပြီး မြေညီထပ်ကိုလည်း
CAR PARKING အဖြစ် ထားပေးကြရပါတော.မယ် ။
YCDC က ဥပဒေတွေ ပြည်သူအပေါ် တန်းတူအခွင်.အရေး မရှိ
ခုတမျိုး ၊ တော်ကြာတမျိုးပါ ။
သူငယ်းချင်းရေ YCDC ကလည်း မြို့လူထုကို တိုက်ရိုက်နှိပ်စက်နေသလို
နယ်တွေမှာလည်း စည်ပင်သာယာဆိုတာ စည်ပင်ကလူတွေပဲ သာယာနေတာ
ပြောင်းလဲသင့်ပြီ။ ရန်ကုန်းတိုင်းစည်ပင်ညွှန်းမှူးက သံလျှင်ဖားကူးရွာက အ
ပေါင်ဆိုင်စင်ယူပြီး ချစ်တီးမိသားစုပါ အရင်လူကြီးတွေကို ၄ လပါတ်လုပ်တိုင်း
ရွှေ အတုံးလိုက်ကန်တော့ပြီး ရာထူးယူထားသူပါ အခုလဲ ကိုယ်မယားကြီးသေ
လို့ နှစ်မကူးခင် အရင်ကတည်းက စရံ ကိုမိတ္ထီလာမှာကတည်းက ပေးထား
တဲ့ SAE မိန်းခလေးကိုခြေတော်တင်ထားတယ်။
အဲဒီလို တဏှာရူး။ အာဏာရူး။ လူ့ ဘီလူးတွေ ကို ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့မြို့တော်ဝန်က
ပြည်သူတွေ ကျန်းမာပျော်ရွှင်သန့်ရှင်းစွာ နေနိုင်ဖို့ အတွက်မြူနီစပါယ်ဖွဲ့တာပါ
အဲဒီအဖွဲ့ အစည်းဟာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ကော်မတီဥက္ကဌအဖွဲ့ဝင်တွေ ရွေးရမှာပါ
နယ်တွေမှာလည်း စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဖွဲ့ ကော်မတီအစီအစဉ်နဲ့
ဘတ်ဂျက်ဆွဲ တင်ဒါပေး မလိုတဲ့ ရုံးဝန်ထမ်းတွေလျှော့ရမယ်။
တရုတ်ကားအစုတ်တွေ ကျောက်ခွဲစက် တွင်းတူးစက် မြက်ဖြတ်စက်အစုတ်
တိုင်းစည်ပင် ညွှန်မှူးကို % ပေးပြီး ချက်လက်မှတ်မှာ ပူးတွဲထိုးနေတဲ့ စနစ်ပြင်
စည်ပင်ဘဏ်က ရှယ်ယာတွေလဲ ပြန်ထုတ်ပြီး မြို့တွေ အတွက် တကယ်လိုအပ်
တဲ့ ဘက်ဟိုး။ မြေသယ်ယဉ်။ အမှိူက်ကားတွေ အိပ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ပြီးဝယ်သင့်
ရန်သူမျိုး ငါး ပါး
၁။မြေစာရင်း( ရွာ က လူတွေပိုသိတယ်)
၂။စည်ပင်သာယာ( မြို့ကပြည်သူတွေကို ငွေကောက်ပြီး ဘာမှမလုပ်ပေးတာ)
၃။ရဲ(ပြည်သူတွေကို အားလုံး အနိုင်ကျင့် နေတာ)
၄။ထွေအုပ်( မြို့မြေ မြောင်းမြေ စားကျက်မြေ မြေစာရင်းနဲ့ပေါင်းစားသူတွေ
၅။ကျန်းမာရေး( အသပြာ နဲ့ မှကုလို့ရတာ )